Miha-mafàna i Tsimbazaza… | GAZETY_ADALADALA
Miha-mafàna i Tsimbazaza…
Posted on 22/12/2009 by gazetyavylavitra
Efa miakatra ny hafanana eny Tsimbazaza eny amin’izao fotoana izao. Efa hita eny ny avy amin’ny ankolafy Ratsiraka, Ravalomanana, toa an-dry Depiote Hery. Tapaka ny lalana manakaiky ny rond point ao Tsimbazaza, noho ireo olona marobe mihirahira eo amin’izany faritra izany. Efa eny koa ny colonel Ravalomanana. Mandeha ny fifampidinihana amin’ireo andaniny sy ny ankilany
Ny anton’izao rehetra izao moa dia noho ny kirin’ireo ankolafy telo tsy maintsy hiditra ao amin’ny Kongresy hanao fivoriana na ho ao na tsia ny avy amin’ny ankolafy Rajoelina.
11h 30 :Hatramin’izao amin’ny 11 ora sy sasany izao dia ampolony ny Baomba mandatsa-dranomaso (lacrymogène) nipoaka tao Tsimbazaza
Ny col Ravalomanana Richard no nitarika sy nandrindra ny mpitandro filaminana teny Tsimbazaza io androany io.
Rehefa raikitra ny sakoroka dia nisy ireo olona no nandositra tany anaty tananan’olona, na tany anaty tanin’anandrano sy ireo lalam-be mivoaka an’iny faritra iny, toy ny mizotra ho any Manakambahiny, izay nahitana sakana, ny mivoaka mankany Ankadimbahoaka ihany koa.
Araka ny feo re teny an-toerana dia biriky hanaovan-trano tao an-tanànan’olona no nalain’ireto vahoaka tonga teny mba hitorahana ny mpitandro filaminana ( feo re satria tara vao tonga teny an-toerana izahay sy Pakysse, nifanena teny an-dàlana dia nifampitaona. Isaorana ihany koa Pakysse tamin’ny fampindramana fitaovana nakàna ny sary ) , ka nisy iray tratra farany tamin’izany. Rehefa nangatahan’ny mpaka sary sy ny mpanao gazety moa ny hamotsorana azy io dia notanterahan’ny Col Ravalomanana izany. Saingy alohan’ny hanatanterahana izany dia nasaina nameno ny antsoina hoe ‘fiche d’interpellation’ aloha ilay zalahy io. Rehefa notakiana moa ny karapanondron-dranamana, dia nilaza ny tsy manana izy tany aminy tany..
Mangadihady Tsimbazaza (ny arabe no resahantsika eto), fa ny mpitandro filaminana sy ny mpaka sary no mameno tanàna.
Mbola eo Tsimbazaza hatramin’izao amin’ny 3 ora sy fahefany tolakandro izao ireo mpitandro filaminana.
Tonga hatrany Manakambahiny ny feom-basy.
19h : Tamin’ny vaovaon’ny TV Plus io hariva io no nahenoana fa nisy 2 naratra mafy, ka nandositra ny iray tamin’ireo rehefa tonga teny amin’ny Hopitaly. Nilaza ny Col Ravalomanana Richard fa tsy misy antony intsony tokony ho nandosirany satria tavela any amin’izy ireo ny findain’ilay zalahy nandositra. Tsy maintsy ahitana laharana niantso azy ao anatin’io. Izy roalahy naratra ireo dia ny fokonolona no voalaza fa nandratra azy, noh izy ireo nanao sakana, ary ny tena nahatezitra ny olona dia ny nahatratrarana cocktail molotov tany amin’ny iray tamin’izy ireo.
19h 30 : TVM = 14 voasambotra ka tamin’izy ireo dia 8 mpametraka barazy, 3 mpizara vola izay mbola notazonina, raha efa navotsotra kosa ny sasany rehefa avy noraketina an-tsoratra ny mombamomba azy ireo, 2 naratra… Nisy ny fandraisam-peo natao tamin’ny RADIO FAHAZAVANA nataon’ny Ministeran’ny Fifandraisana (araka ny filazan’ny Minisitra) ka nambarany fa ao anatin’ny feo voaray ny fiantsoana ny olona hanomana vato rehefa mankeny Tsimbazaza. Handray fepetra, hoy izy, ny Ministera momba izany rehetra izany.
Tsy teny mihitsy nandritra ny hetsika rehetra moa ny filohan’ny Kongresy avy amin’ny firehana Ravalomanana, izay nampiantso ny fivoriana.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: boamba mandatsa-dranomaso, lacrymogène, Rajoelina, Ratsiraka, Ravalomanana, Tsimbazaza |
« NY AN’IZA NO MARINA? Madagasikara/Amerika: vita matavy ny AGOA »
Global Voices Online » The Year that Was in Madagascar : Part III, on 07/01/2010 at 9:01 said:
[…] but fails. Mydago.com publishes the mutiny declaration of some low level military officials. Avylavitra took pictures of the barracks where the mutiny took […]
Global Voices teny Malagasy » Madagasikara tamin’iny taona iny – Fizarana fahatelo –, on 08/01/2010 at 1:51 said:
[…] manamboninahitra lefitra ny Mydago.com. Naka ny sarin'ny toby nisy izany fikomiana izany i Avylavitra .[naotin'ny mpandika teny: sarin'ny hetsika teny Tsimbazaza io araka ny fahalalako […]